Ukwethulwa kwezixhumi ezingangenwa amanzi ngocingo lwezimboni-Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
ISIKHATHI: 2021-03-09 HITS: 12
Izixhumi ezingangeni manzi zizinhlobonhlobo zemikhiqizo ebanzi futhi ehlukahlukene, futhi zenzelwe ukuhlangabezana nohlu olubanzi ngokulinganayo lwezicelo nezindawo.
Indima yesixhumi, uma ihlanganiswa, ukudlulisa amandla kagesi phakathi kwezintambo ezimbili, noma ikhebula nedivayisi. I-elementary physics isifundisa ukuthi ugesi namanzi akusebenzi kahle ngokubambisana, futhi lokhu kuletha izinselelo eziningi uma kukhulunywa ngokusebenzisa imishini kagesi ezungeze amanzi. Kodwa-ke, ngokwanda okukhulu kwemishini kagesi neye-elekthronikhi ezimpilweni zethu zansuku zonke, akumangazi ukubona inani lezicelo ezidinga izixhumi zikagesi ezingangeni manzi zisuka, nezidingo zazo zobunjiniyela zisukela kokulula kuya kokuyinkimbinkimbi.
Ngoba insimu yezimboni ibandakanya izindawo ezahlukahlukene zokufaka isicelo, izidingo zokusebenza kwezixhumi ezingangenisi manzi ezisetshenziswe emkhakheni wezimboni ziphakeme kakhulu. Isixhumi esingangenwa manzi ngokuvamile sinamazinga amaningi amamodeli ongakhetha kuwo. Isilinganiso si-IPXX ukusihlukanisa. Ama-Xs amabili ikakhulukazi asho ukuhlukaniswa kokusebenza okungangeni uthuli nokungangeni manzi.
Isigaba sokuvikela isixhumi:
Isixhumi esingangenisi manzi se-IP65: Kusho ukuthi singamelana nesifutho samanzi.
Isixhumi esingangenisi manzi se-IP66: Kusho ukuthi singamelana nesifutho samanzi esinamandla futhi singasetshenziswa ekhumbini nakwezinye izindawo.
Isixhumi esingangenisi manzi se-IP67: simele incazelo yokukwazi ukumelana nokucwiliswa kwamanzi okwesikhashana okuhlakaniphile.
Isixhumi esingangenisi manzi se-IP68: Kusho ukuthi singacwiliswa emanzini isikhathi eside.
Izicelo ezidinga izixhumi ezingangeni manzi:
Ukukhanyisa kwangaphandle kuyisibonelo esihle sezinhlelo zokusebenza ezidinga izixhumi ezingangeni manzi ukuze kugwenywe ukulimala kwempahla kanye nesixhumi kusuka othulini, emvuleni noma eqhweni. Kulokhu, singabheka izidingo njengokuvikela isimo sezulu. Izixhumi zesimo sezulu zivalwa zivaliwe ohlangothini lwesamukeli ngoba isikebhe sibekwe entweni yokusebenza. Isilinganiso se-IP (Ukuvikelwa kwe-Ingress) kufanele okungenani sibe yi-IP65 ukuvimbela ukungena kothuli namanzi, okungenani ngokwanele ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile kwemishini. Noma yini engenhla kwe-IP65 nayo izolungela, kepha maqondana nokwenza ngcono izindleko zakho, ungahle ufune ukuqinisekisa ukuthi awucacisi ngokweqile, ikakhulukazi ngoba izixhumi zokusebenza eziphezulu zingabiza kakhulu.
Vele, ukukhanyisa kuyisibonelo kepha noma imuphi umshini ongaphandle ongachayeka ezimeni ezinzima zezulu uzozuza kuleli banga lokuvikela. Ezinye izibonelo zifaka imishini yasesiteji, amakhamera ezokuphepha, nemishini yokuphathwa kwethrafikhi. Njengoba lokhu kungukusebenza kwangaphandle, ukumelana nama-UV kungadingeka futhi, ngoba ukukhanya elangeni kungashintsha umbala futhi kwesinye isikhathi kube yimishini yokwenziwa kwezinto ezithile.
Izindawo zezokwelapha zicace bha njengoba imishini ingabekwa ngaphansi kwezimo ezihlukile. Ukuze kuncishiswe ubungozi bokungcola nokusabalala kwama-bacterium noma ama-virus, imishini yezokwelapha idinga ukuhlanzwa nokuhlanzwa njalo.
Inqubo ejwayelekile yokuvala inzalo etholakala ezikhungweni zezokwelapha nasemalabhorethri ukusetshenziswa kwama-Autoclaves, okungamagumbi abulala inzalo ngo-134 ° C phakathi nemizuzu emi-3 (noma kungenjalo ayi-121 ° C phakathi nemizuzu eyi-15-20). Lapho ifakwa kwi-Autoclave yokuvala inzalo, okokusebenza kufanele kuhlukaniswe kubekwe eceleni ukuvumela umusi ukuthi ufinyelele kuwo wonke amakhona nobuso. Lokhu kusho ukuthi ukuqinisekisa ukuphepha okuhle, imishini yezokwelapha, izixhumi ezifakiwe uma zifakiwe, kufanele zikwazi ukumelana nezimo zokushisa ezinomswakama ezinjalo. Ngakho-ke, uma ufuna izixhumi ezingagcina ukusebenza kwazo, uzofuna ukuthola imikhiqizo engazweli ekukhuliseni okushisayo nokumuncwa kwamanzi, ngoba izinhlobo ezithile zezinto ezibandakanya amapulasitiki ahlukahlukene zingashintsha izakhiwo futhi zincibilike emazingeni okushisa angaphansi kuka-134 ° C. Uma kubhekwa lezi zidingo eziphakeme zokuvikelwa kokungena kwamanzi, kunganconywa ukuthi kube nezixhumi ezinesilinganiso se-IP okungenani esingu-IP68 esimweni sokuvuthwa nesingashayiwe ngoba kuzodingeka zingashiswa ngesikhathi senqubo yokuvala inzalo.
Ezinye izidingo zemishini yezokwelapha kungenzeka zifake ukuhambisana komenzi ne-ISO13485, ne-United States 'Food & Drug Administration (FDA) nokuvunyelwa kwe-CE kwe-European Union.
Ucingo lwethu lwezimboni luthanda Ucingo oluqhumayo futhi Ucingo oluvikela isimo sezulu imvamisa sebenzisa izinhlobo ezi-3 zosayizi wesixhumi: G3 / 4, PG11, M20 ngokuya ngokufunwa yikhasimende.
UNingbo Joiwo uneminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho ekuhlinzekeni izixazululo zocingo nezingxenye zokungcebeleka ezinhlelweni ze-telecom ejele iminyaka engaphezu kwengu-15. Sithole impendulo enhle evela kubasebenzisi bethu bezingcingo.
Ukwethulwa kocingo oluphuthumayo lwesimo sezulu oluphuthumayo lwe-analog JWAT209 ngenkinobho ye-SOS -WAT209